सिरहा क्षेत्र नंं ४ को प्रदेश ख मा वाम गठबन्धनका तर्फवाट एमालेका नेता तुलसी प्रसाद यादव प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार बनेका छन् । राजनितिक पृष्टभूमि लामो भए पनि उनी भरखरै एमालेमा आएका हुन् । यस अघि उनी राप्रपामा थिए । एक अवधिका लागि उनी गाविस अध्यक्षमा पनि निर्वाचित भएका थिए । उनका पिता पनि पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्च भएका थिए । एमाले पार्टीमा प्रवेश गर्न साथ उनलाई प्रदेश सभाको लागि टिकट प्रदान गरियो । थोरै समयमा उनी यस क्षेत्रमा चर्चित नेता भएका छन् । सिरहाको दक्षिण पश्चिम कुनामा रहेको क्षेत्र नं. ४ को ख प्रदेश सभा सधै देखिको उपेक्षित र विकासमा पछाडी परेको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रवाट विगतमा नेपाली कांग्रेस र फोरमले जिते पनि यहाँको बिकासमा कुनै ध्यान दिईएन । यस पटक तुलसी प्रसाद यादव यस क्षेत्रवाट उम्मेदवार बनेपछि यस क्षेत्रका जनताको आशा पलाएको छ । तुलसी प्रसाद यादवको लोकप्रीयता दिनानु दिन बढ्दै छ । उनको पछाडी जनताको ठुलो जमात पंक्तीवद्ध हुदैछन् । हक्की स्वभावका नेता तुलसी प्रसाद यादवसंग अनुकल्प दैनिकका सम्पादक अर्जुन थपलियाले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेप प्रस्तुत छ ।
प्रश्न ः चुनावमा उम्मेदवार त बन्नुभयो । कस्तो छ जनताको प्रतिक्रिया ?
यस क्षेत्रका जनताले बल्ल एक अव्वल दर्जाको नेता मिल्यो जस्तै गरेका छन् । म जुन गाउँमा जान्छु । सयको होईन हजारौको भीड जम्मा हुन्छन् । नयाँ नेता मिल्यो भन्छन् । अस्तिसम्म विपक्षीहरुहरुले मलाई हल्का फुल्का रुपमा हेर्ने गरेका थिए । तर अहिले मेरो पछाडी जनताको भीड देखेर उनीहरुलाई पसिना आउन थालेको छ । एक साताको घरदैलोमा नै मेरो जित निश्चित देखिन थालेको छ ।
यस क्षेत्रमा एमालेको मजवुत संगठन पहिल्यै देखि थियो । नेता दरिलो थिएनन् । म आए पछि नेताको रिक्तता पुरा भएको छ । माओवादी केन्द्रको पनि जनमत राम्रै भएको क्षेत्र हो । माओवादी र एमाले मिसिदा यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धन मजवुत शक्तिको रुपमा देखा परेको छ । मेरो व्यक्तित्व र राप्रपावाट मसंगै आएको कार्यकर्ताहरुको विशाल पंक्तीले हाम्रो मास झै बढेको छ । खास गरी युवाहरु मेरो पछाडी धुईरिएका छन् । लाईन लागेका छन् । वाम गठबन्धनका साथीहरुमा पनि नयाँ उत्साह र आशाको संचार भएको छ । अहिले हामी गाउँ गाउँमा पुगेर कोण सभा र जनतासंग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेका छौ । जनताको प्रतिक्रिया अत्यन्त सकारात्मक छ । प्रभावशाली व्यक्तित्व अजय शंकर नायकको पक्षमा पनि ठुलो जनमत तयार हुँदैछ । मेरो पक्षमा पनि जनता ओईरिदै छन् । हामी यस क्षेत्रमा भारी बहुमतले विजयी हुने छौ ।
तपाईसंग के के छन् त बिकासका ऐजेण्डाहरु ?
हाम्रो क्षेत्र सिरहाको अति नै पिछडिएको र उपेक्षित क्षेत्र हो । नेपाली कांग्रेस र फोरमलेजितेर कहिल्यै फकेर नआउने क्षेत्र हो यो । यहाँ एउटा उपचार गराउने सानो अस्पतालसम्म छैन । वाटोघाटो छैन । हाम्रो अगाडी कमलाको बाढी र बालुवा मात्र छ । यस क्षेत्रको बिकासका लागि ठुलै प्रयतन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सानो प्रयासले पूग्दैन । सर्वप्रथम त मिर्चैया कलयाणपुर सिरहा सडक २ लेन पिचिङ्ग संपन्न गराउँछु । यो मेरो पहिलो काम हुनेछ । कल्याणपुरमा एउटा स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्ने कयाम्पसको स्थापना मेरो अर्को प्राथमिकता हुनेछ । प्रति १० विगहामा एक पावरड्रिल वोरिङ्ग गरी कृषकलाई सिंचाई सुविधा दिने मेरो तेश्रो कार्य हुने छ । कल्याणपुरमा कम्तीमा २५ वेडको एक अस्पतालको निर्माणलाई मेरो प्राथमिकतामा राखेको छु । कल्याणपुरमा ढल निकास , वाटो पिचिङ्ग , सडक वत्ती र टाउन प्लानिङ्ग गरी व्यवस्थित शहर बसाउने कार्यलाई अगाडी बढाउने छु । विष्णुपुर गाउँपालिकालाई ५ वर्ष भित्र शहरको मापदण्डमा पुर्याई नगरपालिका स्तरमा पुर्याउने छु । विष्णुपुरमा पनि स्नातक तहसम्मको क्याम्पस , वैंकको स्थापना , विष्णुपुर देखि पश्चिमको राजपुर सडक पिचिङ्गलाई महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखिने छ । नरहा गाउँपालिकामा ग्रामिण वजार विकास योजना लागू गराईने छ । नरहा कल्याणपुर सडकको स्तरोन्नति गरिने छ । अन्य ग्रामिण सडकहरुको पनि स्तरोन्नति गरिने छ । कमला नहरको पानी नपुगेका स्थानहरुमा शाखा तथा प्रशाखा विस्तार गर्न लगाईने छ । कमला नदीको तटबन्धको मर्मत संभार गरी बाँध नफुट्ने अवस्थामा पुरयाईने छ । कमला क्षेत्रमा चरिचरणको पर्याप्त व्यवस्था भएकोले यस क्षेत्रमा पशुपालन व्यावसायलाई बढावा दिईने छ । जनता आवाश मार्फत सवै गरीव तथा दलित घरधुरीहरुलाई पक्की घर निर्माणमा जोड दिईने छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गरिने छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था सुधार गरिने छ र मदरसाहरुलाई पनि सरकारी सुविधा दिलाईने छ ।
प्रचार प्रसार अभियान कसरी संचालन गर्नुभएको छ ?
हाम्रो वाम गठबन्धनको संयुक्त प्रचार टोली परिचालनमा छ । करीव ४ हजार कार्यकर्ता चुनाव प्रचारमा परिचालित छन् । कार्यकर्ताहरु आ आफ्नै घरवाट खाएर चुनाव प्रचारमा तल्लिन भएका छन् । जो जहाँ छ त्यहीवाट सकृय भूमिका खेलिरहेका छन् । दलितहरुको छुट्टै प्रचार समिति छ । महिलाहरु छुट्टै पचिालित छन् । युवा जमात पनि अलग प्रचारमा लागेका छन् । मुस्लिम युवाहरु पनि हाम्रो चुनाव प्रचारमा लागेका छन् । नेता गणहरु कोण सभा र आमसभामा व्यस्त छन् । आजै कल्याणपुरमा हाम्रो चुनाव लक्षित कार्यालयको उदघाटन छ । अव हामी ठुल्ठुला आमसभाहरु पनि आयोजना गर्छौ । शक्ति प्रदर्शनका उपायहरु पनि अपनाउँछौ । घर घरमा नमूना मत पत्र लिएर भोट हाल्ने तरिका पनि सिकाउँदै छौ ।
मधेसवादी दलका उम्मेदवारहरुले कस्तो टक्कर देलान ?
मधेसवादी दलहरुको हौवा मात्र हो । उनीहरु आफूलाई मधेसवादी भन्छन् तर सवैभन्दा अधिक मधेस र मधेसीलाई नै शोषण दमन गर्छन् । अहिलेसम्म कल्याणपुर वरपरका क्षेत्रका लागि एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेनन् । उनीहरुले हामीलाई टक्कर दिन सक्दैनन् । जनता उनीहरुको पक्षमा छैनन् । उनीहरु मात्र जातिय आधारमा मत माग्छन् । जुन आजको युगमा संभव छैन । हामी पनि मधेसी हौ । मधेस र मधेसीको हितमा हामी पनि उभिएका छौं । मधेसीलाई भजाएर खाने मधेसवादी भनाउँदा नेताहरुको जोर चल्दैन अव । जनताले उनीहरुलाई चिनिसकेका छन् । मधेसी प्रमुख नेताहरु नै मधेसवादी दल छोडेर एमाले र माओवादीमा धमाधम पसिरहेका छन् । अव मात्र नामको मधेसवादी दल छ जनता छैनन् त्यहाँ ।